Eyona miboniso mitsha yeTV yokuBukela kunye nokuSasaza kwiCoronavirus Lockdown - Itv
Eyona Itv I-7 Imiboniso emitsha yokuZinkcinkca-Bukela ukuba iCoronavirus ikugcina ngaphakathi
I-7 Imiboniso emitsha yokuZinkcinkca-Bukela ukuba iCoronavirus ikugcina ngaphakathi
(lr) UNick Offerman njengehlathi, uSonoya Mizuno njengoLily eAlex Garland Izixhobo .URaymond Liu / FX
Ezinye iingcali zikholelwa ukuba ukuqhambuka kwe-coronavirus ngelishwa kuya kuba kubi kwiinyanga ezintandathu ezizayo, oko kuthetha ukuba sinokunyanzelwa ukuba sichithe ixesha elininzi emakhayeni ethu kungekudala. Abo bangenabo ubomi boluntu kunokwenzeka ukuba balungiselelwe kwaye balungele ubhubhane oluzayo. I-Ramen noodle kunye neencwadi ezihlekisayo, ngokuqinisekileyo, yindlela eyoyikekayo yokuchitha ubusuku bangoLwesihlanu. Kodwa abo kuni babedla ngokubhabha, ukunyuka intaba, ukukha ii-apile nayo nayiphi na enye into eqhelekileyo, amalungu oluntu ahlengahlengiswe kakuhle afike ngeempelaveki ezothusayo kwinkcubeko.
BONA KWAKHO: Kutheni i-'Akulilo ixesha lokufa 'ukulibaziseka kunokulimaza ukuthengiswa kweMGM yeXesha elizayo
Ke ngoku silinde ukuqhambuka kwesifo ukuba kunciphe kwaye sizise ukubuyela kwimeko yesiqhelo ye-blockbuster (uxolo, Akukho xesha lokufa ), Nazi iziqendu ezisixhenxe kumaxesha abo okuqala onokuthi uzinkcinkce kwaye ubambe ukunceda ukuhambisa ixesha.
Kutshanje, uMboneleli onegalelo uRafael Motamayor kuchaziwe UBukumkani njengomboniso oxubana namaqhinga ezopolitiko e Imidlalo yeethrone kunye nemizabalazo yeklasi ye Isidudu ngesongelo se-zombie. Ukuba loo nto ayikuniki mdla ukuthanda kwakho, asisayi kuswayipha ngokuchanekileyo.
Eli xesha lesenzo sedrama senzeka eKorea ephakathi kwaye liza kubuya kwisizini yalo yesibini kamva kule nyanga. Kodwa, ngaphambi kokuba yenzeke, sebenzisa ixesha lakho lokuphumla ukuze ubambe kwindawo yayo engaphantsi kakhulu. Yintoni ebhetele kunokujonga i-zombie ichetywa yimixokelelwane kunye nemipu? Ewe, ukubabukela benqunyulwe intloko kwaye begqojozwe ngamakrele kunye neentolo, ewe. UBukumkani utsala isibheno seentsomi zasemkhosini zembali kunye nomgubo (kunye nepus ebolayo) yohlobo lwe-zombie. Yidla iintliziyo zakho (ngokoqobo), Uhamba efile .
Abazingeli (Ividiyo enkulu yeAmazon)
Ke, uhh, ungaqinisekanga ukuba uqaphele kodwa amaNazi aluhlobo ukwenza ukubuya mva nje. Oko kungaphantsi. Kodwa ukuba asinakho ukuyiphelisa ngokupheleleyo intiyo kubomi bokwenyani, eyona nto ilungileyo kukubonisa inkcaso eyonwabisayo kobu bubi nakubuqhetseba.
Abazingeli , I-Al Pacino eneenkwenkwezi kunye nolawulo oluveliswe yi IJordani Peele , isenokungabi ngumdlalo weqonga ophakamileyo weTV ngendlela iAmazon eyayinethemba ngayo. Kodwa ngumbono omnandi olonwabo oluninzi ukubukela i-unfurl. Amayelenqe, amaNazi ayimfihlo, iiarhente eziphindwe kabini, isenzo, uburharha, uAl Pacino ngegama elibi. Siyakulinga ukuba ungancumi.
Izixhobo (FX kwiHulu)
UAlex Garland ( Ukutshabalalisa, Ex Machina Ngokuqinisekileyo ngoyena mdali unetalente esebenza kuhlobo lwenzululwazi okwangoku (sidinga itumente yomjikelezo phakathi kwakhe, uDenis Villeneuve, noChristopher Nolan ukubhengeza ubukhulu be-sci-fi). Ukungena kwakhe okokuqala kumabonwakude kuyimpumelelo, nokuba asiqinisekanga ngokupheleleyo ukuba kwenzeka ntoni Izixhobo ngamaxesha onke.
UGarland wavula uMbonisi malunga neenkolelo zakhe malunga netekhnoloji, inkululeko yokuzikhethela, isigqibo kunye noluntu kunye nokuba bonke bayazisa njani le trippy, bafumanisa kakuhle uthotho olutsha olunomda. Olona hambo luphambili lokuthatha (ngaphandle koloyiko olukhoyo lokuzibona ungabalulekanga ngaphakathi kwindalo iphela) kukuba Izixhobo iqinisekile kwaye iyothusa ekuhanjisweni kwayo kangangokuba nayiphi na into ethandabuzisayo malunga nokubumbana komxholo yenziwe ingabalulekanga. Ndicebisa kakhulu.
Amabali aMangalisayo (I-Apple TV +)
U-Apple wenza amaza ngo-2017 xa wabetha isivumelwano kunye noSteven Spielberg ukuvuselela uthotho lwe-sci-fi anthology ukusuka kwiminyaka yee-1980. Ngokukhawuleza namhlanje kwaye iApple TV + ifuna kakhulu isibheno esibanzi. Ngelixa iifayile ze Amabali aMangalisayo Isiqendu sokuqala esibonelelwe kubagxeki ngaphambi kwexesha khange sisokolise, umxholo upakishwe ngamandla.
Amabali aMangalisayo kubalulekile ukuba Umda weTwilight kwaye Isibuko esimnyama wayehlala esiya kunyango kwaye wayekuumsinga weZoloft. Kukuphononongwa okufudumeleyo kunye nethemba ngakumbi lokuba ubume obungaphezulu kwendalo kunye / okanye obungakholelekiyo bubenza njani ubomi bethu nenkcubeko.
UDave (FX kwiHulu)
UDave luchungechunge lwe-semi-autobiographical series eyenziwe ngumrepha uLil 'Dicky osazisa ngobomi bakhe bokwenyani, uDave Burd. Iziqendu zokuqala ezintlanu ezibonelelwe ngabagxeki ziyahlekisa, zinobukrelekrele kakhulu, kwaye zihlala zibalisa. Njengakwiirap zakhe, uLil 'Dicky unesiphiwo sokuyila ngobuchule ilizwi lethu kukungazithembi okuthe cwaka kunye nokuphazamisa ulindelo ngokubulawa okungazinzanga.
Ngelixa inkoliso yeenkwenkwezi zehip hop zixakekile zilahla iingoma zedis kwaye ziqala inyama yenkomo, uLil 'Dicky ungowokuqala emgceni wokuqaqambisa iziphene kunye neentsilelo zakhe ngelixa ezenza ihlaya. Ukuzibonakalisa ngokuzikhusela ekusebenzeni ukudala umlingiswa esingenakukunceda kodwa sibe nomdla kunye neengcambu.
I-Star Trek: iPicard (I-CBS yoFikelelo lonke)
Njengoko besitshilo kuphononongo lwethu, IPicard ayiyo Isizukulwana esilandelayo 2.0 . Luhlobo olucwangcisiweyo, uhlahlo-lwabiwo mali olukhulu, ukubuyela okupakishwe kumlingiswa weempawu ezibonakalayo, kodwa ngemvakalelo eyamkelekileyo yokudandatheka njengoko iqhawe lethu eligugileyo libonakalisa iimpazamo zakhe. Lo mahluko uyile nto kanye uqinisekise uSir Patrick Stewart ukuba abuye ekuqaleni.
Ngelixa IPicard ixhomekeke kuyo Inkwenkwezi yetrek imbali, kubandakanya ii-cameo ezikhohlisayo kunye nezalathiso zolonwabo lwangaphambili, olona ncomo lukhulu esinokulunika lona kukuba luyakwazi ukuzimela. Ukuba kuya kufuneka uzivalele ngaphakathi iiveki ekugqibeleni, unokwenza okubi kakhulu kunokuphinda ujonge umhlobo wakudala kwaye uqhelene.
Umntu wangaphandle (HBO)
Imithombo yolwazi kaStephen King, iHBO, uBen Mendelsohn kunye noCynthia Erivo. Kuninzi ukuthanda malunga nolu chungechunge luthintelweyo, olulandela uphando lokubulala oluthi, ekuqaleni, lubonakale ngathi lulula kwaye lucacile kodwa kungekudala luza koyikisa okungaphaya kwendalo. Ixesha le-10-isiqendu sinokulolula ibali likaKumkani kancinci ngokugcwalisa okuthile kunye nomqala, kodwa Umntu wangaphandle ngumlindo ohlasela ngabom. Umxholo kaKumkani wonwabela intwana yokuvuselelwa mva nje kwaye Umntu wangaphandle yinto yamva nje kumgca omde wohlengahlengiso olomeleleyo.
Yintoni eNtsha ekusasazeni: Nge-11 kaJuni
Umfazi wangaphambili kaTom Petty wathenga ikhaya lakhe labantwana eGainesville
Eyona nto ayifunayo u-Putin-Kwaye Kutheni singenako ukuMnika yona
UJenny Slate ubuyisele oyena Chris uQabane kunye noMntu oPhambeneyo
phuma kwi-amazon prime
Kutheni abantu bezithiyile ii-sjws
Hillary clinton ulwaphulo mthetho lomsebenzi
umark zuckerberg obalekela umongameli
U-Putin uxela imfazwe nathi